Mauritius: A na-emepe paradise paradaịs n’Ebe Ọwụwa Anyanwụ Africa site na iji ụgbọ elu na-aga Nairobi kwa ụbọchị
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mmelite nke Njem njem » Mauritius: A na-emepe paradise paradaịs n’Ebe Ọwụwa Anyanwụ Africa site na iji ụgbọ elu na-aga Nairobi kwa ụbọchị
Airlines • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ na -agbasa na Mauritius • News • Resorts • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem
Mauritius guzosie ike dị ka ebe kachasị mma maka ndị njem South Africa, ma ugbu a, agwaetiti Indian Ocean na-adọta ndị ọbịa Kenya na East Africa na-efega Nairobi kwa ụbọchị.
Njem njem ndi intra-Africa na-adiwanye mma maka ndi n’etiti ndi ozo n’abia n’uwa ma burukwa di nkpa maka onodu aku na uba Africa Thedị njikọ nke usoro ụgbọ elu Kenya Airways mebere n'etiti Nairobi na Mauritius bụ ihe gbanwere egwuregwu maka ndị njem. Afrika ugbua na enweta 3% nke ego ndi njem njem uwa. Njikọ dị mma n'etiti ebe ndị njem njem kachasị dị n'Africa bụ nzọụkwụ dị mkpa iji wee too ọnụ ọgụgụ ahụ.
Ọ bụ ezie na ahịa Europe na-anọgide dị oke mkpa maka ụlọ ọrụ ndị njem nlegharị anya na Mauritian, a na-atụ anya na njem nlegharị anya nke Africa gafere ọganihu na kọntinent ahụ n'ime iri afọ ndị na-abịanụ.
Onye isi ochichi na-ahụ maka njem njegharị na Mauritius bụ Arvind Bundhun na-ahụ Afrika dị ka ahịa na-eto eto n'ọdịnihu maka Mauritius ma nwee nnukwu atụmatụ iji dọta ọtụtụ ndị njem nleta n'Africa ka ha chọpụta ọdịbendị agwaetiti pụrụ iche na ịma mma nke agwaetiti ya. N'ajụjụ ọnụ emere n'oge na-adịbeghị anya, Mr Bundhun gwara AfricaLive.net nke ebumnobi ya iwulite njikọ Africa siri ike, ma ebe a ọ kọwara kpọmkwem ihe Mauritius ga-enye karịa ezumike ụsọ osimiri.
“Ọ bụ eziokwu na anwụ, oke osimiri na aja na-anọchi anya isi ihe ndị njem Mauritius na-eme, mana n’oge na-adịbeghị anya mba agwaetiti ahụ na-abanye na mpaghara dịka ahụike, ịzụ ahịa, egwuregwu na njem nleta ahụike. Taa, ndị ọbịa nwere ike ịnụ ụtọ ọtụtụ ọdịbendị na egwuregwu, ebe mmiri doro anya nke Oke Osimiri Indian adịghị anya karịa.
“N’ebe a na-ahụ maka ịkwalite njem nlegharị anya na Mauritius, anyị ahụla ọtụtụ ndị njem ka obere agwaetiti a masịrị anyị, na-achọpụta ite agbaze ọdịbendị nke na-awaba n’ime nri, egwu na ihe owuwu obodo. Obi na-esikwu ndị njem ike ike na Mauritius bụ otu n’ime mba ndị kasị nwee nchebe na mpaghara Ọwụwa Anyanwụ Africa, na-enye ha ohere inyocha akụkụ ya niile n’enweghị ụjọ.
“Mauritius bụ njem njem kwa afọ maka ezumike golf, yana usoro ọmụmụ 10 nke ọkọlọtọ 18 na oghere atọ nwere oghere itoolu na-enye echiche dị egwu. Ihe omumu gọọlfụ anyị dị elu na-anabata ọtụtụ asọmpi mba ụwa kwa afọ. Dị ọcha nke ikuku, nka ndị nhazi na nnabata ọbịa na-enweghị atụ na-enye Mauritius nsọtụ onye ọ bụla na-agba goof na-achọ.
“Ndị golf na-ebibi maka nhọrọ, ebe akụkụ ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ nke mba ahụ na-enye ọtụtụ ebe golf mara mma dị n'akụkụ osimiri. Agwaetiti ahụ debara aha itoolu na golf na-egwu n'oge afọ kalenda 2018, yana atụmatụ mbata nke ndị mmadụ 4,000. Nke a mere ka ọnụọgụ ndị egwuregwu na ndị ọzọ metụtara golf na 54,000 kwa afọ.
Tụkwasị na nke ahụ, a hụrụ uto 13 pasent n'oge oge dị ala na Mauritius n'afọ gara aga. Nke a bụ ihe na-agba ume, n'ihi na ọ na-egosi na golf nwere ike inyere aka ịgbakwunye ndị mbata n'oge oge mmeghari njem nleta.
“Mauritius na-arụ ọrụ na njem iji gosi ndị nwere ike ịbịa leta na ọ bụ ebe a na-aga golf golf kwa afọ, ọrụ ọ na-aga nke ọma ugbu a.
“N’ezie, e nwere ihe ndị ọzọ mere ị ga-eji gaa n’agwaetiti a: Mauritius bụ agwaetiti ọdịbendị, ịzụ ahịa, iri nri na ntụrụndụ.
“Fishingkụ azụ egwuregwu gbara ọkpụrụkpụ bụ otu n’ime ọrụ ndị na-ewu ewu, mana njem ụgbọ mmiri catamaran, njem ụgbọ mmiri dolphin, njem nlegharị anya, njem dị egwu, ihe okomoko na ngwungwu spa dịkwa.”
Nnukwu Ihe Ise: Ihe Na-adọrọ adọrọ Ndị Na-abụghị Osimiri
Site na nde ndị ọbịa kwa afọ Mauritius na-edekọ ugbu a, 60,000 n'ime ndị a bụ ndị goofu. Agwaetiti ahụ na-enye ndị ọkachamara, ndị nwere mmasị na ndị amateurs na ndị mbido ihe na-erughị iri iri-na iri na asatọ na klas atọ-oghere 18 na ọnọdụ zuru oke maka egwuregwu ahụ.
Debe ya na saịtị di egwu na gburugburu okike di egwu, nke emere maka mmeri nke ndi golf a ma ama dika Peter Matkovich, Peter Allis, Rodney Wright, otutu n’ime akwukwo ndi a guru n’ime ndi kachasi nma n’uwa nile ma acho ha maka nsogbu mbu na ahuhu puru iche ha nyere.
Oge 2015 na 2016 AfrAsia Bank Mauritius Open kara akara nnukwu oge maka Mauritius dịka ebe gọọlfụ ọkachamara. Na 2016, e nyere Mauritius ihe nrite dị egwu nke Golf Destination of the Year maka Africa Indian Ocean na mpaghara mba Gulf site n'aka IAGTO, Global Golf Tourism Organisation.
Mauritius nwere ọtụtụ sekit mara mma maka njem na ndị hụrụ okike n'anya. Obi nke agwaetiti ahụ, site na ugwu ugwu mgbawa na mgbakwunye na ịnweta ụkwụ, na-enyekwa echiche ịtụnanya dị ịtụnanya. Black River Gorges Natural Park bụ nke kachasị ukwuu n’agwaetiti ahụ. Ọtụtụ egwu na-akara ịchọta onye ụzọ mfe. Anyị na-akwado ọmarịcha mkpụrụ sitere na Petrin, na-amalite na elu ugwu nke etiti ala dị larịị ma na-agbada na ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ na Black River. Ọ na - enye onye ahụ ihe ùgwù ohere ịgafe oke ọhịa ndị ọzọ, hụrụ anụmanụ dị ukwuu ma gafere nnukwu ndagwurugwu na mmiri iyi.
Enwere ịma mma mara mma na ịgagharị na Mauritius akara ngosi akara ngosi.
Ruo mgbe ebighi ebi dị ka ihe ncheta ndụ niile ma ọ bụ tinye ya na foto ndị dị oké ọnụ ahịa, ọdịdị ala Mauritius na-enye ọtụtụ echiche dị egwu. N'etiti echiche panoramic kachasị dị na Trou aux Cerfs ndagwurugwu na etiti ugwu, Le Pouce Mountain, Lion Mountain, Le Morne Brabant na oke ọhịa Macchabée na-ele anya na Black River Gorges, oke ugwu na-efegharị efegharị na-ada n'elu oke ohia nke Gris-Gris beach .
Catgbọ mmiri Catamaran
Ma ịchọrọ ịlele ịma mma agwaetiti ahụ site n'oké osimiri ma ọ bụ na ịchọrọ ị reụrị ọ inụ na ụbọchị ezumike, nke a na-ekpuchi site na anyanwụ site na windo a na-ejupụta na ya, ọtụtụ nhọrọ nke njem ụgbọ mmiri dị iji dabaa mmasị niile.
Njegharị ụbọchị niile na mgbazinye nke onwe dị site na mpaghara ugwu, ọwụwa anyanwụ, ndịda ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ. Otu nwere ike ijide ifufe na-aga n'otu n'ime agwaetiti ndị gbara gburugburu Mauritius, ọkachasị n'ebe ugwu; zute dolphins n'akụkụ ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ ma ọ bụ eserese otu ụbọchị ga-aga n'ebe ọwụwa anyanwụ iji mee ka ihe ụtọ dị iche iche nke ụlọ aux Cerfs mara mma na-echekwa. Maka ndị nwere ọmarịcha ịhụnanya, gaa njem mgbede ma lelee ọdịda anyanwụ anya. Enwere ike ịgba akwụkwọ ndị a na ndị na-enye ọrụ na mpaghara ugwu na ọdịda anyanwụ.
Mauritius nwere ogige ntụrụndụ iri na ogige ntụrụndụ. Onye obula na enye ha ohere ighota aku na uba umu osisi na umu anumanu ndi ozo site na uzo di anya dika oke oku, agu iyi, enyí nnụnụ, ọdụdụ, ọdụm, anụ ọhịa na caracals. Enwere ike inye mgbada na oke bekee na obere ugbo na ọbụlagodi ụfọdụ anụmanụ mara mma nwere ike ịbịaru nso, ma ọ bụ ịgagharị njem gụnyere ijegharị na ọdụm. Nhọrọ nke obi ụtọ a na-agaghị echefu echefu na-echere ma ụmụaka ma ndị toro eto gụnyere ịnya ịnyịnya, quad-biking, jeep safaris, ma ọ bụ iji nweta obi gị n'ịgba ọsọ, gaa maka akara zip, igwu mmiri ma ọ bụ njem canyoning.
Na-eri nri, na -ebi nri n'okporo ámá na ịnụ ụtọ nri ọtụtụ ndị Mauritian
A na-egosipụta ọtụtụ ihe mejupụtara ọha mmadụ nke Mauritian na isi nri ya. Nri Mauritian, ma ọ bụ nke ọdịnala, nke ụlọ ma ọ bụ nke ọkaibe, na-egosipụta nhọrọ dị ịtụnanya nke ngwakọta okike, onyinye pụrụ iche na ịgwakọta ngwa nri, agba, savors na aromas, na-enye onye ọbịa nnukwu nri dị egwu.
Taa, nri nri ọtụtụ agwaetiti a na-esite na China, India, Middle and Far East tinyere France na South Africa mee mmụọ ya. Naanị ihe ọ na-ewe bụ ịgagharị iji ghọta na ndị Mauritians hụrụ nri n'okporo ámá n'anya. Ngwurugwu ọ bụla na-enye ọtụtụ iche iche nke mpaghara. Nwee obi uto ma gbalịa ụfọdụ nkwadebe ndị na-ewu ewu dịka dhal puri, farata, samoossa, gato pima, gato arouy. Maka ndị hụrụ nri China n'anya, ihe a ga-eme bụ Ememme Chinatown a na-eme kwa afọ, nri ya bụ maka ọpụrụiche na nri pụrụ iche. E nwere ọtụtụ ezigbo mma na ụlọ oriri na ọedụedụ dịgasị iche iche na Mauritius ma ọ bara uru ịmara na ọtụtụ ndị isi nri Michelin na-arụ ọrụ na mpaghara, na-ahụ na a na-enye ọmarịcha obi ụtọ gastronomic.
Restaurantslọ oriri na ọ qualityụ Goodụ ndị dị mma dị ọtụtụ ma dịgasị iche iche na Mauritius ma ọ bara uru iji hụ na gourmets kachasị arụ ọrụ nwere nhọrọ nke gastronomy mara mma na ebe ndị ọzọ.